Akhri: Gaas oo Itoobiya ugu socdaalay labo arrimood – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Gaas oo Itoobiya ugu socdaalay labo arrimood
A warsame 9 February 2015 9 February 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Cali Gaas ayaa maanta safar ugu baxay dalka Itoobiya, waxaana wafdigiisa ka mid ah xubno wasiiro ah.
Gaas oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Garowe ayaa sheegay inuu madax ka tirsan dowladda Itoobiya kala soo hadlayo arrimo horumarineed iyo la dagaalanka Alshabaab.
“Waxaan saaka u safrayaa magaalada Adis-Ababa ee dalka Ethopia oo aan u aadi doono howlo la xiriira barnaamijyada horumarineed ee mashaariicda Puntland iyo la dagaalanka argagixisada” ayuu Gaas.
Madaxweynaha oo soo hadal-qaadey weerarkii koox ka tirsan al-Shabaab ay ku qaadeen bar kanorool oo ku taala Bosaso habeenkii Axadda ayaa yiri “Waad aragteen howlgaladii laga fuliyey magaalada Boosaaso iyo guulaha waaweyn ee ciidanka Puntland ka gaareen howlgaladaasi sidookale ciidamadeenu waxay howlgal fiican ka wadaan buuralayda Galgala iyo dhulka ku xeeran”
Waa safarkii saddexaad ee Madaxweynaha Puntland ku tago dalka Itoobiya muddo 60 maalmood ah. Gaas ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka Puntland 8-dii Janaayo ee sanadkii hore 2014.